Qualcomm ga-eji 5G modem dị na etiti ya | Gam akporosis
Qualcomm ga-eji 5G modem dị na ndị na-arụ ọrụ ya n'etiti
Edere Ferreno | | IFA, Noticias
5G na-enweta ọnụnọ n'ahịa, yana n'ọhịa nke ndị nhazi. N'ime ụbọchị ole na ole, anyị ahụla ibe abụọ ga-eji 5G mee ihe maka modem jikọtara ọnụ, dịka ha dị Exynos 980 y Kirin 990. Qualcomm ejirila 5G mee ihe na Snapdragon 855, ekele maka modem mpụga, nke enwere ike iji dịka nhọrọ. Dị ahụ na-achọ ịgbasa nhọrọ a na ndị nhazi ya.
Na ogbako na IFA 2019, Qualcomm ekwuola na ndị nhazi usoro Snapdragon 600 na 700 ga-etinye 5G. Ha ga-eme ya site na 5G modem, nke mere na njikọta a ga-amụba n'ụzọ dị otú a n'etiti etiti. Nzọụkwụ nke ọtụtụ ndị nọ na-eche ugbu a.
N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ America na-achọ ịgbasa usoro ndị a ma kwadebe ha maka ọdịnihu. Ọ bụ ezie na ugbu a ha enyebeghị ọtụtụ nkọwa gbasara atụmatụ ndị a. N'ihi na Qualcomm ekwughị nke ahụndị na-arụ ọrụ ué n'ime usoro abụọ a Snapdragon ga-abụ ndị na-eji ihe ngosi 5G kwuru.
Anyị amaghịkwa ọ bụrụ na modem 5G a ga - eji rụọ ọrụ ga - adị ọhụụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-eji X50 ha na-eji ugbu a eme ihe. Ihe ezi uche dị na ya bụ na ha dị ọhụụ, imeghari na ndị nhazi ndị a n'ime etiti ha, mana ụlọ ọrụ ahụ agwaghị anyị ihe ọ bụla ruo ugbu a. Ya mere, ị ga-echere.
Qualcomm na-akwadebe ihe dị mkpa itu ukwu na ogo maka ndị na-arụ ọrụ n'etiti ya. Firmlọ ọrụ ahụ ekwuola na ndị nhazi na Snapdragon 700 dị na ya ka ha rutere, a ga-arụpụta ha na 7 nm. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ịrụ ọrụ dị mma na obere ike oriri n'aka ha.
Agbanyeghị na nke a ga - abụ ihe na - eme na 2020 niile. Ya mere, anyị ga-amatakwu banyere atụmatụ Qualcomm iji mee ka ọ dị n'etiti ndị nhazi, ịkụ nzọ karịa 5G. Anyị na-atụ anya ịmata ndị nhazi nke ika ahụ ga-eji ndị a 5G modem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Qualcomm ga-eji 5G modem dị na ndị na-arụ ọrụ ya n'etiti
WhatsApp jikọrọ Google Assistant na ọrụ olu ọhụrụ
Vivo Z1X: A na-emegharị etiti dị n'etiti ika ahụ